पैसाको अभावमा विद्यार्थीले जिपी कलेजको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन: खिला सापकोटा | KTM Khabar
२०७३ भदौ २७ गते १०:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । यती बेला प्लस टुको परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई अव कस्ता, कुन कलेज पढ्ने भन्ने विषयको चासो बनेको छ । यही सन्दर्भमा प्लस टु पछाडी कस्ता कलेज पढ्ने ? भनेर गिरीजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेज "जिपी कलेज" का क्याम्पस प्रमुख खिला सापकोटासंग ktmkhabar.com का श्याम कार्कीले भिडियो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंशः
साइन्सको त रिजल्ट आइसक्यो अरु विषयको रिजल्ट आउने तयारीमा छ र यो संगै सरको व्यस्तता कस्तो छ ?
हामी कलेजको आन्तरिक तयारीमा छौँ । भर्नाका लागि लगभग तयारी अवस्थामा रहेका छौँ । साइन्सको रिजल्ट आइसक्यो र हामीसंग साइन्स फ्याकल्टी नभएको र हामीसंग बिबिएस, बिए, बिएड पढ्ने विद्यार्थी कमै आउने भएको हुदाँ हामीले सम्पुर्ण तयारी गरिसकेका छैनौ अव अरु फ्याकल्टीका रिजल्ट आउनेसम्ममा भर्नाका लागि पूर्ण रुपमा तयारी भएर आफ्नो मार्केटमा कसरी जाने, विद्यार्थीहरुलाई कसरी भर्ना गर्ने, सम्पूर्ण रणनीति सहित प्रस्तुत हुने छौँ ।
विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्न कसरी माध्यम अपनाइरहनु भएको छ ?
हामी दुई/तिन वर्ष देखि एउटै संस्कारमा लागिरहेका छौँ । हामीले त्यत्रो ठूलो लाखौँमा खर्च गरेर विज्ञापन गरेर हामीले यस्तो दिन्छौ, उस्तो दिन्छौ भन्ने गरेका छैनौ । हामी विद्यार्थीको घर घर जान्छौ, हामी प्लस टुहरुमा जान्छौ , हामी क्याचमेन्ट रहेका जिल्लाहरुको प्लस टुमा पनि हामी एक चोटी पुग्छौ र म्यासेज फ्लो गर्छौ । जिपी कलेजले भनेको गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ । यसको साथै पैशा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पनि अध्यन गर्ने वातावरण श्रृजना गरेको छ । तपार्ईहरु पढ्न आउनुहोस् भनेर एक चोटी म्यासेज दिन जान्छौँ । यसको लागि हामीले विभिन्न मिडियाहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ ।
विद्यार्थीहरुको घर घरमा कलेजको जानकारी दिन जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु हुने रहेछ ?
हामी त पोजेटिभ छौँ । हुन त हाम्रा मान्छेहरुले पोजेटिभ कुरा मात्र सुनाउछन् र नेगेटिभ कुरा थाहा पाउन गाह्रै हुन्छ भन्छन् । हुन सक्छ हामी पनि कमजोर हौला तर पनि विद्यार्थीको रेस्पोन्स राम्रै हो । हामीले पहिलो वर्षमा १३ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको यो कलेजमा अव हामी चौथो ब्याज भर्ना गर्ने तयारीमा छौ । तेश्रो ब्याज पोहोर भर्ना गर्यौ । दौश्रो ब्याजमा १०० जना भर्ना गर्यौ, त्यति बेला हाम्रो बिबिएसमा मात्र थियो, बिए थिएन । तेश्रो ब्याजमा हामीले एकै चोटी २५० जना भर्ना गर्न सफल भयौ र यसपाली त हामीले फ्याकल्टी पनि थपेका छौँ । पहिला हाम्रो म्यानेजमेन्ट थियो भने यसपाली बिए, बिएड र बिसिए प्रोगाम थपेका छौँ । यो भएका कारण हामी कन्फिडेट छौँ हामीसंग विद्यार्थीको रेस्पोन्स पोजेटिभ भएका कारण हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा कुनै कन्जुस्याई गरेका छैनौँ । एउटा हाइफाई देखाउने हाइएर लेभलको प्राइभेट कलेजको लेभल र हामीले दिने एजुकेशनको लेभल एउटै किसिमको छ । पढाउने टिचरहरु हामीले त्यहीबाट हाएर गरेको छौँ र उहाँहरुले पनि त्यहीबाट आएर पढाइदिइरहनु भएको छ । त्यस कारण विद्यार्थीहरु एकदम सन्तुष्ट छन् र अहिले त हामी दाविका साथ भन्न सक्छौँ सात सय तथा आठ सय विद्यार्थीहरु यस वर्ष भर्ना गर्न हामी सक्षम हुन्छौ ।
जिपी कलेजका क्याम्पस प्रमुख खिला सापकोटासंगको थप भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्:-